Gudiyada doorashada oo la kulmay Handadaad iyo Saraakiil NISA ka tirsan oo lugaha la galay - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Gudiyada doorashada oo la kulmay Handadaad iyo Saraakiil NISA ka tirsan oo...
Gudiyada doorashada oo la kulmay Handadaad iyo Saraakiil NISA ka tirsan oo lugaha la galay
Cakirnaanta doorashada Soomaaliya ayaa lugaha la sii galeysa jiitanka sanadkii sadexaad marka loo eego hanaankii soo bilowday 2020, taasina meesha kama saarin in wali xaaladdu tahay halis ah oo mugdi galineysa rajada dowladnimo, iyo nabad ku noolaha dadka dalka ku sugan.
Shalay isbedelkii uu Rooble ku sameeyay xubno kamid ah gudiga xallinta khilaafaadka doorashada, waxay sahleen in dibadda usoo baxaan macluumaad ku saabsan hanjabaad ay si toos ah xubnaha gudiyada u gala kulmaan saraakiil ka tirsan hey’adaha amniga gaar ahaan NISA.
Ilo wareedyo dhinacyo badan leh oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in saraakiil uu hogaaminayo madaxa mukhaabaraadka sirdoonka Soomaaliya ahna Taliyaha dabagalka NISA, Korneel Cabdullahi Daahir oo Cabdullahi Dheere ku magac dheer ay xiriiro taleefan iyo kulamo qarsoodi ah la yeesheen xubno ku jira gudiyada doorashada heer federal iyo heer maamul goboleed, iyagoona kala kulmay cabsi gelin.
Xogta waxay tilmaameysaa in Korneel Cabdullahi Dheere oo shaqsiyaad kale arintan mas’uul uga ah uu hanjabaadda gudiyada doorashada ku doonayo boobka iyo qaska doorashada, iyo xitaa in aysan doorashada sii soconin.
Midowga musharaxiinta iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa marar badan su’aalo ka keena hanaan socodka doorashada, balse xogta muujineysa jirintaanka hanjabaado gudiyada ah ayaa sahleysa in la fahmo dhibaatada jirta.
Ra’iisal wasaare Rooble oo bilo kahor ballan qaaday inuu tilaabo ka qaadayo saraakiisha ku milanta siyaasadda ayay midowga musharaxiinta u gudibiyeen macluumaadka ku saabsan gudiyada loo habjabay iyo qaabka ay saraakiisha qaar ee amniga ugu lug yeesheen doorashada.
Xubin kamid ahaa raggi la eryay ee gudiga xallinta khilaafaadka kana gaabsaday in magaciisa la xigto ayaa sheegay in ay heysatay laba daran mid dooro oo ahayn in ay kuriga Yaasiin Fareey fasaxaan ama naftooda halis gasho, iyagoona laba jeer la kulmay Shaqsiyaad uu soo dirsaday sarkaalka aan badi la arkin Korneeo Cabdullahi Dheere.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa u arka in sidaan aysan ku sii socon karin doorashada, dalkuna uu halis ugu jiro fowdo amni oo siyaasaddan ka dhalata, iyadoona dad badan ku tilmaameen in doorashadaba daacad laga ahayn oo la diidan yahay.
Korneel Cabdullahi Dheere oo wajiyo badan dhanka siyaasadda, aadna loogu yaqaan inuu is rog rogo, ayaa xilligan lagu tirayaa dhanka Villa Somalia, dhinacaasina waxaa la sheegay in ay ka aamin baxeen xildhibaano ay horay usoo saarteen.
Waxaa rajada kaliya ee la qabo ku xirantahay shirka ay dhawaan yeelan doonaan golaha wadatashiga qaranka, inkasta oo la sii ogyahay in aysan xakameyn karin saameynta tooska ee saraakiisha amniga ku leeyihiin doorashada.
Previous articleGOBOLKA SOOL
Next articleDEG DEG-Sarkaal Awood badan ku leh NISA oo ka badbaaday Qorshe lagu dili lahaa